समाचार - पजामाको लागि कुन कपडा राम्रो छ?
चालक दल मोजा
घुँडा उच्च मोजा
कम कट मोजा
अझ राम्रो उद्धरण प्राप्त गर्नुहोस्
पजामाको लागि कुन कपडा राम्रो छ?
1 कुन राम्रो हो, शुद्ध कपास वा मोडल?
शुद्ध कपास: यसमा राम्रो आर्द्रता अवशोषण, राम्रो न्यानो प्रतिधारण र एन्टिस्टेटिक गुणहरू, सास फेर्न सकिने पसिना, छाला-अनुकूल र नरम मलहरू छन्। यसबाहेक, शुद्ध कपासको पजामा कपासबाट बुनेको छ, जुन प्राकृतिक रूपमा प्रदूषण-रहित छ, छालामा जलन गर्दैन, र लगाउन सुरक्षित छ। तर यो झुर्राउन सजिलो छ र चिल्लो गर्न सजिलो छैन, र यो संकुचन गर्न र विकृत गर्न सजिलो छ, र यो लगाउन सजिलो छ।
मोडल: यो चिल्लो र नाजुक, हल्का र पातलो, चिसो र हाइग्रोस्कोपिक, लगाउन सहज र शरीरको नजिक, सास फेर्न सकिने र पसिना निकाल्ने महसुस हुन्छ। कपडामा राम्रो लोच र बलियो स्थिरता छ, र सबै समय चमक र कोमलता कायम राख्न सक्छ। कपडा रंगीन हुन्छ, जति धेरै धोइन्छ, नरम हुन्छ, र जति धोइन्छ, उति उज्यालो हुन्छ। तर मूल्य महँगो छ।
PK परिणाम: कपास पजामाको मूल्यमा स्पष्ट फाइदाहरू छन्, र तिनीहरू सबैभन्दा लागत-प्रभावी पजामा हुन्। नरम र छाला-अनुकूल कपास सामग्रीले उत्तम आराम अनुभव ल्याउन सक्छ। यद्यपि मोडल शुद्ध कपास भन्दा नरम र अधिक हाइग्रोस्कोपिक छ, मूल्य धेरै उच्च छ। बजारमा उपलब्ध अधिकांश कपडाहरू मोडल र अन्य फाइबर मिश्रित कपडाबाट बनेका हुन्छन्। तुलनामा, एउटै मूल्यमा शुद्ध कपास पजामा धेरै राम्रो छ।
2 कुन राम्रो छ, बाँस फाइबर वा भांग?
बाँस फाइबर: प्राकृतिक र शुद्ध सुरुचिपूर्ण बनावटको साथ ओसिलो विकिंग, राम्रो हावा पारगम्यता, चम्किलो चमक, फेड्न सजिलो छैन, र राम्रो ड्रेप। एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टी-माइट, प्राकृतिक स्वास्थ्य हेरचाह, शुद्ध कपास जस्तै नरम अनुभूति, रेशम जस्तै चिल्लो अनुभूति, छाला-अनुकूल र थोरै एन्टि-रिंकल। यद्यपि, दीर्घकालीन प्रयोगको प्रभाव शुद्ध कपासको रूपमा राम्रो हुँदैन, र यसको नमी अवशोषण र हावा पारगम्यता बिस्तारै प्रयोग पछि कम हुनेछ।
लिनेन: चिसो र कुरकुरा, बनावटमा हल्का, पसिना आउँदा शरीरको नजिक हुँदैन। उज्यालो रङ, फेड गर्न सजिलो छैन, नरम र उदार टोन। एन्टि-स्टेटिक, एन्टि-फ्रिक्सन, ओसिलो र फफूंदीको लागि संवेदनशील छैन। यो मानव छाला को उत्सर्जन र स्राव को लागी उपयुक्त छ। यद्यपि, यसको कमजोर लोच र अपेक्षाकृत नराम्रो हातको अनुभूतिको कारणले, यो शरीरको छेउमा लगाउँदा रिस उठ्न सक्छ, र यदि यो हेरचाह गर्न सजिलो छैन भने यसलाई चाउरी पार्न सजिलो हुन्छ।
PK नतिजाहरू: बाँसको फाइबर आराममा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो छ, आखिर, छाला-अनुकूल र नरम कपडाहरू पजामाका लागि बढी उपयुक्त छन्। यद्यपि, शुद्ध बाँस फाइबर पजामा र शुद्ध हेम्प पजामा बजारमा अपेक्षाकृत दुर्लभ छन्। धेरै जसो सामान्य पजामाहरू अन्य फाइबरहरूसँग मिश्रित कपडाहरूबाट बनेका हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू फरक हुन सक्छन्। खरिद गर्दा कपडाको संरचनामा ध्यान दिनुहोस्।
पोस्ट समय: नोभेम्बर-29-2021
पजामा कसरी छनौट गर्ने?
नम्बर 8, Baijianshan रोड, आर्थिक र प्राविधिक विकास क्षेत्र, Xuanzhou जिल्ला, Xuancheng शहर, Anhui प्रान्त।
८६-०५६३ २६२६ ०५५
साइटम्याप, AMP मोबाइल,